Deni oo diiday in Shirka uu ku baaqay Farmaajo lagu qabto Magaalada Garoowe - Awdinle Online
Deni oo diiday in Shirka uu ku baaqay Farmaajo lagu qabto Magaalada Garoowe
Iyada oo xalay Madaxweynaha Soomaliya uu shir isugu yeeray Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, ayaa Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxaa ay dalbadenen in shirkaasi lagu qabto Magalada Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in farmajo uusan Puntland kala tashan shirka uu ku baqay, sidaas daraadeedna ay dalbanayaan in lagu qabto Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
“Puntland waxay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15 Febraayo, inkastoo aan lagala tashan in Garoowe lagu qabto, maadama uu dhammaaday mudo xileedkii hay’addaha Dastuuriga ah ee DFS, waxayna ku talinaysaa in Shirka lagu qabto Muqdisho, ayna kasoo qayb galaan Saamileyda Siyaasada iyo Beesha Caalamka ayaa lagu yiri” Qoraalka Puntland.
Dhinaca kale Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa wararka aan helnay waxaa ay sheegayaan in Maamulka Puntland ku raacay in Shirka lagu qabto Magaalada Muqdisho.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur kana mid ah Midowga Musharixiinta ayaa sheegay in shirkaasi uu Madaxweyne Farmaajo ku doonayo in uu isaga horkeeno Puntland iyo Galmudug.
Dhawaan ayay aheyd amarkii Madaxda dowladda, Madaxda dowlad Goboleedyada & gobolka Banaadir ay shirk u yeesheen Magaalada Dhuusamareeb, shirkaas oo ugu dambeyn wax natiijo ah kasoo bixin.
Previous articleGolaha Ammaanka ee QM oo War kasoo saaray xaaladda Soomaaliya
Next articleMaxay ka wada hadleen Beesha Caalamka & Ururada bulshada rayidka ?